Gaaskii ugu badnaa abid oo laga helay Deegaan ay Soomaali leedahay ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Gaaskii ugu badnaa abid oo laga helay Deegaan ay Soomaali leedahay
Gaaskii ugu badnaa abid oo laga helay Deegaan ay Soomaali leedahay
Wasaaradda Macdanta iyo Shidaalka ee dalka Itoobiya ayaa shaaca ka qaadday Shirkad dhinaca Tamarta ah oo laga leeyahay dalka Britain ee New Age (African Global Energy Ltd) iney deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ka heshay keyd gaaska dabiiciga ah oo gaaraya 1.6 Trillion Cubic Feet.
Wasiiru dowlaha wasaaradda Macdanta iyo Shidaalka ee dalka Ethiopia Guang Tulam oo u warramay wargeyska The Reporter oo ka mid ah wargeysyada gaarka loo leeyahay ee ugu afka dheer dalka Itoobiya ayaa sheegay iney shirkadda baaritaan muddo wadday ay ku heshay keyd gaaska dabiiciga oo garaya 1.6 Trillion laga helay Deegaanka Hala-quraan.
“Hadda waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan gaaskaasi dalku uga faa’ideysan lahaa iyo siyaabaha ugu habboon oo lagu suuq geyn karo.” ayuu yiri Guang.
Shirkadda Mareykanka laga leeyahay ee Greencom ayaa wasaaradda Macdanta iyo Shidaalka ee dalka Itoobiya ka codsatay iney gaaska dabiiciga ee la helay ay soo saarto. Greencom waxay soo jeedisay qorshe ku aaddan gaaska dabiiciga iney soo saarto ayna gaaskaasi ka soo saarto shidaal nocyadiisa kala duwan.
Shirkadda Greencom waxay sheegtay iney dooneyso iney isticmaasho teknooloojiyadda GTL oo gaaska dareere u baddalo kaddibna ay soo saarto Gaaska iyo Saliidda. Soo saaridda iyo kala saaridda shidaalka lacagta ku baxeysana waxaa lagu qayaasay 2 bilyan oo doolar.
“Teknoloojiydda GTL waxaa laga tijaabiyey lagana hirgeliyey waddama badan” ayuu yiri Guang. Waxaa Greencom ay naga dooneysana waxaa weeye ayuu yiri inaan u oggolaanno iney gaaska noo soo saarto iyada oo adeegsaneyso teknooloojiyadda GTL.
“Waxaanna u sheegnay inaan arrinta kala tashaneyno shirkadda New Age ee gaaskaasi baaritaanka ku heshay” ayuuna sii raaciyey.
Shirkadda shinah laga leeyahay ee Poly GCL ayaa ku howlan sida ay deegaanka Soomaalida gaas dabiici ah oo horay looga helay ay u soo saari lahayd. Shirkadda Poly GCL oo heshiis ay shidaalka uga soo saareyso aagagga Kaalub, Hilaala ay la gashay dowladda Itoobiya.
Wasiiru dowlaha wasaaradda Macdinta iyo Shidaalka ee dalka Ethiopia Guang Tulam wuxuu sheegay “Shirkadda Poly GCL iney gaas dabiici ah oo dhan 4.7 Trilion Cubic Feet. Waxayna howsha ay gaaska ku soo saareyso barbar waddaa baaritaanno kale ee ceelal cusub oo ay ka qodeyso deegaanada keydka shidaalka laga helay.”
“Ilaa iyo haddana waxay shirkadda Poly GCL keydka Shidaaka ee ay heshay ee ahaa 4.7 Trillion waxay gaarsiisay 6.7 Trillion” ayuu yiri Guang Tulam.
Keydka gaaska dabiiciga ee ay Itoobiya ka heshay deegaanka Soomalida sidi uu dalku uga faa’ideysan lahaa waxaa in mudda ah darsad wadday shirkad madax bannaan waxayna noo soo bandhigtay daraasddii ay sameysay . “Cid walba oo ay darasaddaasi quseyseyna waa la gaarsiiyey anaga ahaanna natiijada daraasadda suuqgeynta gaas, waan aqbalnay” ayuu yiri.
Gaaska laga soo saaraya aagagga Kaalub iyo Hilaala waxaa tuubbooyin dhererkoodu gaarayo 760 km looga qaadayaa dakadda Jabuuti si loogu sifeeyo. Dalka Shiinahana waxaa u qorsheeysan gaaska uu soo sarayo isaga oo Teknooloojiyadda casriga ah adeeganay iney darera u beddelaan kaddibna ay dalkooda u dhoofiyaan.
Itoobiya iyo Jabuutina waxay kala saxiixdeen heshiiska Tuubbooyinka gaaska wada dalkeeda lagu soo gaarsiinayo.
“Shirkadda Poly GCL oo heshiiska tuubbooyinka gaaska qaadayo lagu gaarsiinayo Jabuuti iyo Itoobiya la gashay waxay hadda waddaa darsidda naqshadda tuubbooyinka halka la marin lahaa, howlaha naqshadeynta marka ay shirkaddu dhammeysana ay dhismaha tuubbooyinka ay ku qaadaneyso muddo seddex sana ah, 2021-kana la billaabayo shidaalka in la dhoofiyo.” ayuu yiri Guang.
Shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Poly GCL waxay keyd shidaal ay ka heshay aagga Hilaala. Waxayna tijaabada shidaalka ugu horreyey ay sameeysy bishii June 2018-kii.
Hase yeeshee, khubaro madax bannaan oo u warrantay wargeyska The Reporter waxay sheegeen “36 bilood ee shirkadda loo qabtay iney shidaal ku soo sarto ay aad u badan tahay, waddamada caalamka intooda shidaalka soo saratay ay soo saaridda tijaabada ah u qabtaan waxa aan ka badneen lix bilood.
Previous articleMadaxweyne caadeystay in uu aflagaadeeyo Soomaaliya had iyo jeer(Muxuu yiri markaanne?)
Next articleWax badan ka Ogow Sababta dowlada Hindiya ay u dooneyso inay xirto Daaciga Zaki Naik.